Pageloot အားအခမဲ့အတွက် QR Code ကို Online တွင်မည်သို့ဖန်တီးရန်နှင့်စကင်ဖတ်ရမည်နည်း
QR Code တစ်ခုဖန်တီးနည်း။
ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများတွင်စတင်အသုံးပြုရန်အတွက် QR ကုဒ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအလျင်အမြန်ကူးယူရန်စီးပွားရေးကဒ်ပြားများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်ကိုယ်တိုင်ကသိခြင်း၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြသည် ဘယ်လိုစကင်ကုဒ်ဖန်တီးရန်.
QR ကုဒ်သည်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာစက်မှချောချောမွေ့မွေ့ရယူနိုင်သောဒေတာများကိုသိုလှောင်ရန်အတွက် binary, numeric နှင့် alphanumeric characters များကို encoding ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒေတာသိုလှောင်မှုကိုကန့်သတ်ထားသောသမားရိုးကျဘားကုဒ်များနှင့်မတူဘဲ QR ကုဒ်များသည်စွမ်းဆောင်နိုင်သည် သတင်းအချက်အလက်အများကြီးသိုလှောင်။ သင်ရှာနေတယ်ဆိုရင် link တစ်ခုအတွက် QR ကုဒ်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲမင်းနေရာမှန်ရောက်ပြီ
သင်၏ QR ကုဒ်များကိုအဘယ်ကြောင့်လုပ်ရမည်နည်း။
ထူးဆန်းသောအသွင်အပြင်ရှိသော်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးရာတွင် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ အာရှနိုင်ငံများစွာတွင်သုံးစွဲသူများအား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သတင်းအရင်းအမြစ်များကိုချိတ်ဆက်ရန်လက်ရှိနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဥပမာရုရှားနိုင်ငံတွင်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ logging လုပ်ရန် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။
နယူးယောက်တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းနှင့်အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းများကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများပင်ဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသူတို့၏စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန်ဤကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် QR ကုဒ်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုလေ့လာရန်မည်သည့်စီးပွားရေးသမားသို့မဟုတ်မည်သည့်ပညာရှင်မဆိုအမှန်တကယ်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒါဆိုငါတို့ရှာတွေ့ပြီ။
3 QR Code တစ်ခုဖန်တီးနည်းအဆင့်များ
ဒါဟာရိုးရှင်းပါသည် သင့်ကိုယ်ပိုင် QR ကုဒ်ကိုလုပ်ပါ။ သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဗဟုသုတအပြည့်အစုံရှိရင်အဲဒါကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ကြည့်ကြရအောင် သင့်ကိုယ်ပိုင် QR ကုဒ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း ခြေလှမ်းများ၏ပုံစံဖြစ်သည်။
ပထမအဆင့်အနေဖြင့်သင်ရွေးရန်လိုအပ်သည် QR code generatorဥပမာ Shopify မှ ပုဂံ နှင့် goqr.me. ဒီကိရိယာတွေကိုအွန်လိုင်းမှာရရှိနိုင်တယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ QR ကုဒ်မည်သို့အခမဲ့ဖန်တီးရမည်နည်း.
ထို့နောက် tool ကို အသုံးပြု၍ code ကိုဖန်တီးပြီးအသုံးပြုသူရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည့် target URL နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ Facebook စာမျက်နှာသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
ဒီနေရာတွင်သင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ တည်းဖြတ်နိုင်သည်၊ ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်သောဒေတာများရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ နားလည်ရလွယ်တယ် QR ကုဒ်ထည့်နည်း။ ရုံ ဒီမှာဖန်တီးမှုရှိပါ သင်၏လိုဂိုနှင့်ကာတွန်းအချို့ကိုလည်းကုဒ်ထဲသို့ထည့်ပါ။
တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ code ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအားနှိပ်သူမည်သူမဆိုလမ်းကြောင်းမှန်သို့ရောက်ရှိရန်သေချာစေသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအဘို့အ3လွယ်ကူသောခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည် ဘယ်လို QR ကုဒ်ရလဲ.
QR Code အသစ်ကိုခြေရာခံခြင်း
ရုံသိ အွန်လိုင်း QR ကုဒ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မလောက်ဘူး သင်လည်းသိရန်လိုအပ်သည် QR code ခြေရာခံခြင်း ဒါကြောင့်သင်ဟာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ SEO tool အချို့ကိုအတူတူသုံးပါ။ ကုဒ်မှမည်မျှအသွားအလာရောက်ရှိနေကြောင်းနှင့် ဦး တည်ရာသို့မည်သည့်အရေးယူမှုများပြုလုပ်သည်ကိုကြည့်ပါ။
အပေါ်ကအဆင့်တွေကရှင်းပါတယ် QR ကုဒ်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲ။ မှန်ကန်သော QR code generator ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ဤတွင်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုထားသောကိရိယာသည်အကောင်းဆုံး QR မီးစက်ဖြစ်သည်။ ကုဒ်ကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် virtual ကမ္ဘာများကိုချိတ်ဆက်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။
5 လွယ်ကူသော QR Code ကို စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Hacks
အတွက် QR ကုဒ်များ ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း
အတွက် QR ကုဒ်များ E-Commerce